आइपीएलः केकेआरले टस जित्यो, हैदरावादमा भुवनेश्वर कप्तान ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, चैत १० । १२ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले सनराइजर्स हैदारावादविरुद्ध टस जितेर बलिङ रोजेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार ४ः१५ बजेदेखि कोलकातामा शुरु हुँदैछ ।
नियमित कप्तान केन विलियम्सन घाइते भएका कारण आज हैदरावादकाे कप्तान जिम्मेवारी भुवनेश्वर कुमारले पाएका छन् । सनराइजर्समा दिनेश कार्तिक कप्तान छन् । अहिलेसम्म आइपीएलमा कोलकाताले २ र हैदरावादले एक पटक उपाधि जित्न सफल भएका छन् । आजको खेलमा को-कोले पाए मौका? हेर्नुस्–
कोलकाताः दिनेश कार्तिक (कप्तान), क्रिस लिन, सुनील नारायाण्, रबिन उथप्पा, शुभमन गिल, नीतिश राणा, आन्द्रे रसल, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, लकी फर्गूयन र प्रसिद्ध कृष्णा
हैदराबादः भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), डेविड वार्नर, जोनी बेयरस्टो, मनीष पाण्डे, दीपक हूडा, शकिब अल हसन, विजय शंकर, यूसुफ पठान, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल र संदीप शर्मा
यो वर्षको आइपीएलको पहिलो खेलमा गत संस्करणको विजेता चेन्नई सुपर किंग्सले रोयल च्यानेन्जर्स बैंग्लोरलाई हरायो । महेन्द्रसिंह धोनी कप्तान रहेको चेन्नईले विराट कोहली नेतृत्वको बैंग्लोरलाई ७ विकेटले पराजित गर्न सफल भयो ।
ट्याग्स: IPL, Kolkata Knight Riders Vs Sunrisers Hyderabad